စည်သူအောင် - MYSTERY ZILLION
ကိုစည်သူအောင် ကို MyWikipedia Jesus က အတ်မင် ပိုစေရှင် အတွတ် လပ်ထိုးလို့ ဆဲလိုက် သဗျို။ ဝါသနာပါရင် လာထား။ ကိုစည်သူအောင် ရဲ့ talk page မှာ
okisan wrote: »
ကျုပ်သွားကြည့်ပြီးပြီ ...။ အဲဒီဟာတွေကို ဘာသာပြန်ပေးရင် သူက support လုပ်မယ်ပေါ့။ အဲဒီ Jose77 ဆိုတာဘာလဲ... ဘာသဘောလဲ....။ ဘယ့်နှယ်ဟာပါလိမ့်ဗျာ...။ :O
ဒါမျိုးတွေလဲရှိတယ်လား ... တကယ်မှာ အားလုံးကောင်းဖို့လုပ်နေတာမဟုတ်လား အဲလိုစိမ်ခေါ်သလိုလိုကြီးတော့ မကောင်းပါဘူး ... ဟို အင်္ဂလိပ်မေဂျာကနေ ကွန်ပျူတာကူးလာတဲ့ အမကြီးကို ဘာသာပြန် အကူအညီတောင်းလိုက်ပြီး ရွတ်ပြီး ပြန်တင်ပေးလိုက်ရင် ကောင်းမလားဘဲ ..။
နိုး ... နိုး ... မလိုဘူး... ဘာသာပြန်ပေးစရာကိုမလိုဘူး... အဲဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့စာတွေလဲမဟုတ်ဘူး။ ဒါကိုဘာသာပြန်ပေးနိုင်တာနဲ့ အက်ဒမင် ပို့(စ်)(တ်) နဲ့လဲ မပတ်သက်ဘူး။ ဒီအတိုင်းထားလိုက်ပါ။ ဆွဲထုတ်တဲ့အစကို ဆက်မဆွဲနဲ့။
လစ်လျူရှုခြင်းသည် အကောင်းဆုံးရာ မည်၏
လစ်လျူမရှုနဲ့ ... ပြန်ရေးဗျာ ... သူပြောတာကို ဘာသာမပြန်နဲ့ သူ့ကို စာတစ်ပိုဒ် ပြန်ရေးပြီး ဘာသာပြန်ခိုင်းလိုက်ပေါ့ဗျာ ... ပညာယူချင်လို့ပါလို့ ...:14::14::14::14:
ကျွန်တော့် ကိုယ်ပိုင် အမြင်ပေါ့နော်....။
မြန်မာ Wiki ရဲ့ Admin လုပ်မယ့်လူကို ဘိုလိုကောင်းမကောင်း လာစမ်းတယ်ဆိုတာ
သူ့ရည်ရွယ်ချက် က ထင်ထင်ရှားရှားကြီးကို လမ်းချော်နေပါတယ်။
Admin တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ ဒါကြီးကို ဘာသာပြန်ပြမှလား။
နောက်တစ်ခုက Myanmar Wiki မှာ Admin လုပ်မယ့် သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ Post တွေ ဒိုင်ခံတင်နိုင်ဖို့
ထက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုက ပို အရေးပါပါတယ်။ ပညာစမ်းသည်ပဲဖြစ်စေ၊ တိုက်ခိုက်သည်ပဲ
ဖြစ်စေ၊ မဖြစ် ညစ်ကျယ် အဓိပ္ပာယ်မဲ့ တဲ့ ဟာတွေကို အရေးစိုက်နေရင်၊ အချိန်ကုန်တယ်၊ အလုပ်ရှုပ်တယ်။
ကိုယ့်မှာ သူ့ထက် အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေ၊ လုပ်စရာ တွေရှိတယ်၊ ဒါ့ကြောင့် သူကို ကြောင့်ကြခံပြီး ဂရုပြု မနေကြောင်း ပြလိုက်ပါ။
သိပ်ဖွတဲ့ ကိစ္စက ကိုယ်ကပြန်ရန်ဖြစ်ရင်၊ လူသိပြီး ပိုကြီးထွားလာတယ်။ သူကကိုယ့်ကို မှားစေချင်နေတာ။
ညိမ်ညိမ်လေးသာ နေလိုက်။ ဥပက္ခောပြုထားလိုက်ရင် တဖြည်းဖြည်း ဘယ်သူမှာ စိတ်မ၀င်စားတော့ပဲ မေ့သွားရော။
ဒါမျိုးလေး မဆိုးဘူး :71::71:
ကျနော် ကြားဖူးတဲ့ ဗမာ စကားပုံလေး ၁ခု၊ ၂ခုလောက်ပြောပြမယ်။ ကိုညမီးအိမ်အတွက်ပါ။
”ခွေးလှေးခုန် ဖုန်မထ”၊ ”ခွေးဟောင်တိုင်း ထမကြည့်နဲ့”၊ ”ကိုယ်ကောင်းရင် ခေါင်းမရွေ့”
ကျနော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ။ သူတပါးပြောတိုင်း ဂရုမစိုက်သင့်ပါ။ ခွေးဟောင်တိုင်း ထမကြည့်ပါနဲ့။ အိပ်ရေးပျက်ပါတယ်။
ပတ္တမြားမှန်ရင် နွံ့မနစ်ပါ။ ဒါကြာင့် ကိုယ်သာအဓိကပါ။ ခွေးလှေးခုန် ဖုန်မထပါ။ သိပ်စိတ်ပင်ပန်းမခံပါနဲ့။
ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ ပရိတ်သတ်ထဲမှာ ကိုယ့်ကိုအားပေးမယ့်သူ၊ လှောင်ပြောင်မဲ့သူ အမျိုးမျိုးပါနိုင်ပါတယ်။
ဒါကို ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီး၊ အားပေးတဲ့ပရိသတ်ကို နှုတ်ဆက်၊ လှောင်ပြောင့်တဲ့ပရိသတ်ကိုကျတော့ ရန်တွေ့တဲ့အလုပ်ကို တကယ့်အောင်မြင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ မလုပ်ကြပါ။ ကိုယ်ကောင်းရင် ခေါင်းမရွေ့တဲ့သဘောပါ။
ဆိုလိုရင်းကိုသာ မြင်အောင်ကြည့်ကြပါ။ စကားလုံးတွေကို အဓိပ္ပါယ်လိုက်မကောက်ဖို့ ကြိုတောင်းပန်ပါတယ်။
သူတို့ကြိုးစားသလို အားကျတဲ့လူတွေထဲက လူနည်းစုလေးတောင်လိုက်မလုပ်နိုင်ကြဘူး။
ခုဟာက ကိုစည်သူအတွက်ပြောနေကြတာမဟုတ်ဘူးလား ငါမျက်စိလည်လာပြီနော် ကဘီဟုတ် :106:
ကိုသာသာ ပြောတာ တကယ်ကို မှန်သော စကားဖြစ်ပါတယ်.....လူသားအားလုံး အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသော အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ကြပါစေ............
ဟုတ်တော့ဟုတ်သလိုလိုပဲ အတိုဂျီးရဲ့။ ဒါပေမယ့် အနော်ပြောချင်တာက ကိုစည်သူ့ကိုမဟုတ်ဘူး။ အနော်ထင်တာကိုပြောမယ်နော် ကိုစည်သူကတော့ ဘာမှပြန်ရှင်းနေမယ်မထင်ဘူး။ လိုအပ်လာရင် ပြောသင့်တဲ့သူက တရား၀င် ကိုစည်သူကို လာပြောမှာပေါ့။ အတင်းပြောသလိုပြောတဲ့ စကားကို ကိုစည်သူက ပြန်ပြောနေရှင်းနေလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးလေ။ အမှန်က အနော့်အနေနဲ့ဆိုရင် ဒီလို debate တို့ argue တို့ကို စိတ်မပါဘူး။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနေရတာ စိတ်ချမ်းသာတယ်။ အနော်တို့ နေစဉ် လှုပ်ရှားရှင်သန်နေရတဲ့ဘ၀ အမျိုးမျိုးတွေက ပင်ပန်းပါတယ်ဂျာ။ ဒီလိုမလိုအပ်တဲ့ ကိစ္စတွေကို အချိန်ကုန်ခံပြီး စိတ်မပင်ပန်းစေချင်တဲ့စေတနာနဲ့ ကျန်တဲ့သူတွေ သိစေချင်တဲ့သဘောပါ။
ကိုယ်ကရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးထားမယ်ဆိုရင် သေးသေးမွှားမွှားလေးတွေကို Neglect လုပ်သင့်တာကို လုပ်ရမယ်လေ။ အနော်တို့ Mz ရဲ့သဘောထားကပြန်ရန်တွေ့ဖို့မှမဟုတ်တာ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်နေကြတဲ့သူတွေများ ဘယ်လောက်ပျော်ဖို့ကောင်းသလဲ။ လူတစ်ယောက်ကို ဒေါသဖြစ်ရတာ အရမ်းပင်ပန်းပါတယ်ဂျာ။ သူနဲ့ကိုယ် အယူအဆမတူရင်တောင် ဒေါသမထွက်ပဲ ဥပက္ခာလေးထားပေးလိုက်ရင် တော်တော်သက်သာပါတယ်။ ဟူး......... :18:တော်ဘီဂျာ။ ဒီနေ့အလုပ်နားလို့ ဟိုနေ့ကလို အတိုညမီးအိမ်ရဲ့သတင်းလို သတင်းကောင်းလေးကြားရမလားဆိုပီး အိပ်ရာနိုး ဖွင့်တော့ဒီအကြောင်း၊ ကော်ကော်သောက်ပြီးတော့ ပြန်ရှင်းရ။ အနော့်ပျော်စရာ အချိန်လေးတောင်လျှော့သွားဘီ။ ကောင်မလေးဆီဖုန်းဆက်လိုက်အုံးမယ်။ :101:
အတိုဂျီး MrDBA, အနော့ကောင်မလေးနဲ့ လည်လည်သွားမလို့ ပိုက်ပိုက်ချေးပါလားဟင်။ ဒေါ်သန်းသန်းနုက နေလွှဲလိုက်လေ။ တစ်၀က်ဆုံး တစ်၀က်ဆိုင်းပေါ့. ဟီးဟီး
ကျွန်တော် ကတော့ ဒီ အကြောင်း ကို ဆက်မဆွေးနွေးစေလိုပါ။
ဒါမျိုးတွေကြောင့် မကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ကို ယခင်က ကြုံဖူးပါသည်။
Admin တွေကို တောင်းပန်ချင်တာ ဒါကြီး ကို ပိတ်လိုက် ဖို့ပန်ကြားလိုပါတယ်။
တခြားညီနောင်များလည်း ကိုယ့်ခံစားချက်များကို ကိုစည်သူဆီကို Email နှင့်ဖြစ် စေ PM နှင့်ဖြစ်စေ
ပြန်တုန့်ပြန်ဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ် ... MZ အနေနဲ့ကို ပြန်တုန့်ပြန်ဖို့ လိုပါတယ် ... သူ့အနေနဲ့ စည်သူ ဘယ်က လာသလဲဆိုတာ လေ့လာမှာပါပဲ ... ဒီလို လေ့လာတဲ့ MZ ကို ရောက်လာမှာ သေချာပါတယ် ... ဒီလို မတုန့်ပြန်တော့ MZ က လူတွေက နားလည်ခွင့်လွတ်တတ်ကြပါလားလို့ မမြင်ပဲ အလကားကောင်လေးတွေပါလို့ မြင်သွားနိုင်ပါတယ် ... MZ ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အထင်သေးသွားနိုင်ပါတယ် ...
ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ သဘောက ပြန်ရန်ဖြစ်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး ... စကားကြီးဆယ်ခွန်းထဲက သင့်တော်ရာ တစ်ခုခုနဲ့ ပြန်ပြောဖို့ ဆိုလိုပါတယ်။ Debate သဘောပါ ... ဒါဟာ ကောင်းတဲ့ အလေ့အကျင့် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ... ဒီလို MZ Admin တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စည်သူကို ထိလာရင် ကျန်တဲ့သူတွေက မခံဘူးဆိုရင် စည်းလုံး ညီညွတ်မှုကို ပြသရာလည်းရောက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါးစိမ်းသည်တွေကို ရန်သွားဖြစ်ဖို့ မဆိုလိုပါဘူး ... သူက ကလိတယ် ကိုယ်က ပြန်ကလိဖို့ပါ ... တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လည်း MyWikipedia ကို ကြော်ငြာတဲ့ သဘောမျိုးသက်ရောက်လာနိုင်ပါတယ် ... ဟဲဟဲ ဟုတ်တယ်မလား ကိုစည်သူရေ ... ကျွန်တော်က အရှုပ်ထုတ်ထဲ ၀င်မိရင် မပြီးမချင်း ပြန်မထွက်တော့ဘူးဗျ ... အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ အချိန်မရတဲ့ အတွက်ပါ ... ကစ်သာကစ် စူသီရေ ... အားပေးတယ် .... MZ ကွ ...:14::14::14:
MZ အဖွဲ့သားတွေကို အမြင်ကိုလေးစားပါတယ်။ ကျွန်တော့အနေနဲ့ကတော့ ဒါမျိုးတွေ လက်မခံဘူးဗျို့။ လစ်လှူရှူ့လိုက်ရင် ပါသွားမှာပေါ့။ :39:
သတင်းတစ်ခု ဆက်ပြောရရင် ထူးမြင့်နောင်ရဲ့ ဆရာ မိုက်ကယ် အက်မင် ရွေးပွဲမှာ NO vote များလို့ တစ်နေပြီ။ ) ကိုစည်သူအောင် အက်မင် ရွေးပွဲမှာ တင်လိုက်ရင်ရလောက်ပြီ။ ကျွန်တော်ကတော့ ပေးတောင်မလုပ်တော့ဘူး၊ ဟိုကောင်ရှိနေသ၍။
သတင်းတစ်ခု ဆက်ပြောရရင် ထူးမြင့်နောင်ရဲ့ ဆရာ မိုက်ကယ် အက်မင် ရွေးပွဲမှာ No Vote များလို့ တစ်နေပြီ။ ) ကိုစည်သူအောင် အက်မင် ရွေးပွဲမှာ တင်လိုက်ရင်ရလောက်ပြီ။
ကိုကြီးစန်း သတင်းလာပေးပြီးငြိမ်နေလို့ စောင့်နေတာ .. ဟဲဟဲ။
ကို ဒီဘီ တို့ ...တစ်ဆိတ်လောက်ဗျာ ... အဲဒီ font နဲ့ font driver တွေကို အခုလောလောဆယ် ဘယ်ကနေ download လို့ ရနိုင်မလဲ ... သိကြရင်လမ်းညွှန်ကြပါဦး။
ကို ဒီဘီ တို့ ...တစ်ဆိတ်လောက်ဗျာ ... အဲဒီ Font နဲ့ Font Driver တွေကို အခုလောလောဆယ် ဘယ်ကနေ Download လို့ ရနိုင်မလဲ ... သိကြရင်လမ်းညွှန်ကြပါဦး။ :d
အဲဒီဖောင့်တွေကလေ ရောင်းတာ မဟုတ်လား အရင်က ဒီက ဒေါင်းလုဒ်စင်တာမှာ ယူဆာတစ်ယောက်ရှဲလို့ ရှိဘူးတယ် နောက် သူတို့ ကန့်ကွက်လို့ ပြန်ဖြုတ်ပေးရဖူးတယ်၊ ဟီးဟီး ဒီအထဲမှာ ရုံးမှာ လုပ်လို့ သုံးနေတဲ့လူတော့ ရှိမှာပါ သူပေးချင်ရင် Pm နဲ့ဖြစ်ဖြစ် ပေးပါလိမ့်မယ် ..။ (မျှော်လင့်ကြည့်တာ)
သူများတွေ အလကားပေးနေတာကို ရောင်းနေရသေးတယ်လို့ .... ဟွန့် ..... ကျေးဇူးပါဗျာ... ရှာကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်... အင်တာနက်တစ်ခွင်ပြဲပြဲစင်ပေါ့ ... ဟီး...။
ကိုဘီဟုတ်ပြောတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်ဆိုတာ ဒီပိုစ်လေးကိုရည်ညွန်းချင်တာလို့ထင်ပါတယ်ဗျ။
ဘာပဲပြောကိုစည်သူရေ သက်ရောက်မူတိုင်းမှာတန်ပြန်သက်ရောက်မူရှိတယ်ဆိုတာတော့မမေ့နဲ့ဗျာ။ သူမကောင်းတာလုပ်ရင် သူမကောင်းတာပဲပြန်ရမယ်ဗျ။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ ကိုစည်သူပြန်ပြောပါလို့လဲမပြောချင်ဘူးဗျ။ သည်းခံခြင်းသည်အောင်မြင်ခြင်းလို့လဲကြားဖူးတယ်။ ကို PHP ပြောတာလဲမှန်သင့်သလောက်မှန်ပါတယ်။ ကိုစည်သူအနေနဲ့ ပြန်ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တောင် ကိုယ်ပြောတဲ့စကားက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်(ဂုဏ်သိက္ခာ)ပြန်ထိခိုက်စေမဲ့စကားမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဗျာ။
ကျွန်တော် အတွက် အားလုံး မခံနိုင်ဖြစ် နေကြတာကျွန်တော် သိပါတယ်။ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် MZ က member တွေ ကြောင့် အရမ်းပဲ အားတက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော် ကိုအခုလိုလာစော်ကားတာ ကို ကျွန်တော် က ဒေါသတကြီး တုန့်ပြန်ဖို့ အစီစဉ်လုံးဝမရှိပါ။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာ တွေ ကို စော်ကားလိုက်သလိုပါပဲ ကျွန်တော့် ကို စော်ကားတာက။ ဒါ့ကြောင့် သိအောင် တော့ တစ်ခုခု လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
ပညာသားပါပါလေးပေါ့ စည်သူဘဲဥ၁၅ ရေ။ :d:d:d
အကောင်းဆုံးကတော့ မြန်မာ၀ီကီတိုးတက်ဖို့ အခြေကျဖို့ လမ်းကြောင်းမှန်ဖို့ မဖြစ်မနေလုပ်မယ်လို့သာ စိတ်ထဲဇွဲတင်းလိုက်ပြီး ရှေ့ဆက်ချီတက်၊
သူတလူငါတမင်းတော့ မဖြစ်ချင်ပါဘူး သို့ပေမယ့် my.wiki မကောင်းရင် ဘာလို့ mm.wiki လို့ထပ်မလုပ်နိုင်ရမှာလဲ၊ mz.wiki တောင်ရှိသေးတာ၊ my.wiki ရဲ့ ကောင်းတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုယူ အများသူငါ အကျိုးများဖို့ ဦးတည်ပြီးလုပ်မယ်၊ အလကားပေးတဲ့ service မှာ Admin နေရာအတွက်ဖြစ်နေရတာ စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်။
နောက် အဲဒီဖောင့်ကလေးကို ဘာလို့ အလကားမပေးနိုင်ရတာလဲ၊ unicode ဆိုတာ နိုင်ငံတော် ပရောဂျက်ပါ၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဘဲဖြစ်သင့်တယ်၊ ဖောင့် rendering ကောင်းတဲ့လူနဲ့ unicode logic/algorithm ကောင်းတဲ့လူ ပူးပေါင်းသင့်နေပြီ။
ဘယ်သူမှ ၀ယ်မသုံးတဲ့ဒီဖောင့်ကို အလကားပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် ဂုဏ်ယူရမှာမဟုတ်ဘူးလားဗျာ၊ ဘာလို့များ သမိုင်းထဲမှာ လှလှပပလေး မှတ်တမ်းမ၀င် ချင်ရတာလဲမသိဘူး၊
တော်ပီဗျာ နှာပြန်စေးသွားလို့ ဆေးသောက်လိုက်ဦးမယ်။
ကျွန်တော် အခု အဲ့ဒီ အစီစဉ်ကို zawgyi-one နဲ့ လုပ်မလို့ လုပ်နေပါတယ်။ အားလုံးလည်း ကူပေးကြပါ။
ကို ကျော်ထွန်း ကလည်း ကူညီနေပါတယ်။
မြန်မာ တွေ ဂုဏ်တက် စရာ MZ ပေါ်လာတာပါဗျ။
မနည်းအောင့်ထားရတာနော် ... အတင်းနှာစေးနေရတာ...။ နာ့စိတ်နာတိနေလို့ ...။ ငယ်စိတ်တွေပြန်ပေါ်လာရင် ခက်ကုန်တော့မှာပဲ ...။ ဟင်း ... :14:
mmwikipedia.org ကတော့ မရတော့ဘူး ...။ ဒီမှာ ..
Created On:23-May-2007 00:19:30 UTC
Last Updated On:04-Jul-2008 13:09:52 UTC
Expiration Date:23-May-2009 00:19:30 UTC
Registrant Name:Ryan Lazuka
Registrant Street1:9401 Mentor Ave PMB 168
ဒါပေမယ့် wikipedia.org ရဲ့ subdomain အဖြစ်ဆိုရင်တော့ ရမယ်ထင်တယ်။